ပေါင်းစပ် LED အရေးပေါ်ယာဉ်မောင်း
နေအိမ် > စက်မှုသတင်း
မည်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ ၀ င်ရောက်လုပ်ကိုင်ပါစေ“ မိုက်မဲသော” နှင့်“ လျှို့ဝှက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ” အမြဲရှိသည်။ ထိုအခါအလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အဘယျသို့ "မိုက်မဲ" တည်ရှိ? ဤဆောင်းပါးသည်စီမံကိန်းအတွက်လေလံဆွဲခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ မှားယွင်းသောလေလံအတုများနှင့်အတုအယောင်ကဏ္ on လေးရပ်အားအသေးစိတ်ဖော်ပြ......
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ၁၉ ခုမြောက်အမျိုးသားကွန်ဂရက်အပြီး၊ ကုမ္ပဏီအများအပြားသည်တရုတ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းအပေါ်တသမတ်တည်းအမြင်များရှိကြသည်။ တရုတ်၏စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အဆင့်သစ်သို့ရောက်ရှိတော့မည်ဟုအခိုင်အမာဆိုကြသည်။ အမိန့်ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခ......
မျက်နှာကျက်ကို LED မီး ၂၉၀၀၀ နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အံ့သြစရာပဲ!
ချီကာဂို၏စိုစွတ်သောနွေရာသီနှင့်အေးသောဆောင်းရာသီသည်ဖောက်သည်၏မုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုကန့်သတ်သည်။ ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ဗိသုကာများသည်အလင်းဖြည့်ပြီးသာယာသောနေရောင်အခန်းတစ်ခန်းကိုဖန်တီးရန်နှင့် Spaces လေးခုကိုစီးမျဉ်းများဖြင့်ပျော့ပြောင်းစေရန်ရည်ရွယ်သည်။
LED Lighting စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများလေးခုအဆောက်အ ဦး
အဆောက်အအုံအမျိုးအစားများသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်အစိုးရရုံးအဆောက်အအုံများ၊ စီးပွားဖြစ်ရုံးအဆောက်အအုံများ၊ နိမ့်ကျသောလူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး များနှင့်ဆိုင်ကြမ်းပြင်ပေါ်ရှိစီးပွားရေးအဆောက်အအုံလေးမျိုးတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
High Power ၏အပူစီးကူးမှုပထမ Nylon ကို LED
Lamp cooling systems သည် aluminium ကိုပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ နိမ့်သောအပူစီးကူးမှုကြောင့်ပလတ်စတစ်များသည်အအေးလိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။ LED အပူ၏လယ်ပြင်တွင်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ မကြာသေးမီက DSM ကုမ္ပဏီသည်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများ၏အထွေထွေအားသာချက်များ၊ အပူစီးကူးမှု၏မြှင့်တင်မှု၊ ပလတ်စတစ် ၁၀-၅၀ ၏စီးကူးနိုင်မှ......
မြင့်မားသောစျေးကွက်မှထွက်ပေါ်လာသော LED Lighting လုပ်ငန်း
ထုတ်ကုန်စွမ်းဆောင်ရည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးခြင်းသည်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုတွင် LED သောအလင်းရောင်areasရိယာများသို့ပိုမိုလျင်မြန်စွာ LED ထွက်ပေါ်လာစေသည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှကျွမ်းကျင်သူများစွာသည်။ သက်ဆိုင်သော applications များ။
ကွမ်ဘီးစက်မှုဥယျာဉ်၊ Songgang မြို့၊ Baoan ခရိုင်၊ Shenzhen, Guangdong, China, အထပ် ၅၊ အဆောက်အ ဦး (၂)၊
@Copyright 2020-2021 Shenzhen Dengfeng Power Co. , Ltd.